WAR CUSUB: Soomaaliya oo ka tanaasushay Kiiskii badda Ee Kenya – XAMAR POST
WAR CUSUB: Soomaaliya oo ka tanaasushay Kiiskii badda Ee Kenya
Warbaahinta Waddanka Kenya ayaa saaka daabacaya in Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ay ku heshiiyeen in ay si siman u wadaagaan biyaha Somaaliya ee ay Kenya sheegatay.
Wargeyska The Star ayaa sheegay in uu arkay heshiis ay ka shaqeysa Dowladda Qatar oo la xiriira kiiska Badda ee Kenya iyo Soomaaliya kaas oo sheegay in Biyaha ay muranka gelisay Kenya loo qeybsado si 50% ah islamarkaana ay labada dal wadaagaan kheyraadka ku jira halkaasi.
Heshiiska horudhaca ah ee ay aragtay The Star ayey sheegtay in dhawaan labada dal ay ku kala saxiixan doonaan Magalada DOoxa ee Caasimadda Waddanka Qatar maaddaama ay heshiiska ka shaqeysay Qatar.
Dowladda Soomaaliya wali kama hadlin arrinkan hayeeshee laba todobaad ka hor dowladda Somaaliya ayaa sheegtay in xiriirka diblomaasiyadeed ee la soo celiyay uusan ka qeyb ahayn kiiska Badda.
Ra’isalwasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed oo Somaaliya wakiil uga ahaa kiiska Badda ee ICJ ayaa sheegay in marna aan taako ka mid ah biyaha SOomaaliya laga tanaasuleyn xiriirka diblomaasiyadeed iyo Baddana aysan xiriir lahayn.
Sharikadda Qatar Petroleum, ayaa saami ku leh sharikad laga leeyahay Waddanka Talyaaniga oo lagu magacaabo Eni , taas oo howlo sahmin ah ka wadda qaar ka mid ah xermooyinka shidaalka ee ay muranka gelisay Kenya.
Qatar Petrolium waxaa ay sidoo kale heshiis kula jirtaa Sharikadda TOTAL ee laga eeyahay France taas oo qeyb ka ah sharikadaha sahminta ka wada biyaha Soomaaliya ee ay Kenya sheegatay.
Eni waxaa ay leedahay 41.3% halka Total leedahay 33.8% sidoo kale sharikadda Qatar Petrolium ayaa laga iibiyay 15% oo ka mid ah saamiga goobaha sahminta lagu wado.
Diplomaasi u dhashay Qatar kuna sugan Nairobi ayaa xaqiijiyay in hehsiiskaas uu soo dedejiyay khilaafka diblomaasiyadeed ee labada dal, waxaase u beeniyay in Qatar ay ilaashaneyso saamiga kaga jira Biyaha sahminta ku socoto.
Puntland oo mamnuucday goobaha ganacsi in lagu qoro luuqad shisheeye
Inkabada 50 kun qof oo ka qaxay Magaalada Qasa Ee Falastiin